Punch-Drunk Love (2002) | MM Movie Store
ဘယျရီတဲ့ သူဟာ ကွောငျတောငျတောငျလူလို့ပဲပွောရမလားမသိ…သူဟာ အခဈြဆိုတာ မကွုံခဲ့ဖူးသူ ….သူ့မှာ အဈမတှေ ၇ ယောကျတောငျရှိတယျ…ဒီအဈမတှဟော သူငယျငယျက ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ရယျစရာကိစ်စတဈခုနဲ့ ပတျသတျပွီး သူ့ကိုအမွဲလှောငျပွောငျနလေရှေိ့တယျ …
အဲ့ဒီအဈမတှကေပဲ အခဈြမရှာတဲ့သူ့အတှကျ ခဈြသူတဈယောကျ ဝိုငျးရှာပေးကွတယျ ..အကှကျတှဖေနျပေးကွတယျ ….ဒါပမေဲ့လညျး ဘယျရီတဈယောကျဟာ အဆငျမပွနေခေဲ့လတေော့ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြနတောပေါ့ ..ဒီလိုနဲ့ တဈနမှေ့ာ သူ့ရဲ့အထီးကနျြမှုကို ခဏတာဖွဖြေောကျဖို့ လုပျငနျးတဈခုနဲ့ဆကျသှယျမိခြိနျကစလို့ကိစ်စပေါငျးစုံကွုံရပါတော့….
ဒီကားက မငျးသားကွီး Adam Sandler ကိုတော့တျောတျောမြားမြားသိကွမှာပါ..ရုပျရညျပွပွေဈတဲ့မငျးသားမဟုတျပမေဲ့ Drama တှေ Romance တှမှောဆိုပရိတျသတျနှလုံးအိမျကို လှနျစှာမှ ဖမျးစားနိုငျတာသိကွမှာပါ…သူ့ကားတျောတျောမြားမြား တကယျကောငျးလှနျးသလိုယခုကားလညျး ကောငျးတဲ့ဇာတျကားတဈကားပမေို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
ဘယ်ရီတဲ့ သူဟာ ကြောင်တောင်တောင်လူလို့ပဲပြောရမလားမသိ…သူဟာ အချစ်ဆိုတာ မကြုံခဲ့ဖူးသူ ….သူ့မှာ အစ်မတွေ ၇ ယောက်တောင်ရှိတယ်…ဒီအစ်မတွေဟာ သူငယ်ငယ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရယ်စရာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ကိုအမြဲလှောင်ပြောင်နေလေ့ရှိတယ် …
အဲ့ဒီအစ်မတွေကပဲ အချစ်မရှာတဲ့သူ့အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက် ဝိုင်းရှာပေးကြတယ် ..အကွက်တွေဖန်ပေးကြတယ် ….ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်ရီတစ်ယောက်ဟာ အဆင်မပြေနေခဲ့လေတော့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတာပေါ့ ..ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ရဲ့အထီးကျန်မှုကို ခဏတာဖြေဖျောက်ဖို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်မိချိန်ကစလို့ကိစ္စပေါင်းစုံကြုံရပါတော့….
ဒီကားက မင်းသားကြီး Adam Sandler ကိုတော့တော်တော်များများသိကြမှာပါ..ရုပ်ရည်ပြေပြစ်တဲ့မင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့ Drama တွေ Romance တွေမှာဆိုပရိတ်သတ်နှလုံးအိမ်ကို လွန်စွာမှ ဖမ်းစားနိုင်တာသိကြမှာပါ…သူ့ကားတော်တော်များများ တကယ်ကောင်းလွန်းသလိုယခုကားလည်း ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပေမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…